Fifanomehezana kalitao - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > Fifanomehezana kalitao
Certification System Management Management
Ny fanamarinana rafitra momba ny kalitao fanamarinana dia narotsak'iISO9001: 2008. Ny vokatra rehetra ao amin'ny birao sy ny foibe fizarana dia ankatoavina ofglobal ary mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpaninjara ny habakabaka an'habakabaka ary ny fiarovana ny firenena amin'ny fanamarinana rafitra momba ny kalitao.
Ny fananana fisoratana anarana dia mampiseho amin'ny mpanjifanay fa ny topmanagement dia ekena ny hanomezana ireo mpanjifa singa miaraka am-boalohany ka tsy misy atahorana ny fanaovana hosoka.
Politika momba ny tontolo iainana
Ny YIC dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana, mba hisorohana ny fandotoana sy ny fanomezana fahafaham-po ny filàna fanarenana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Hifandray tanana isika amin'ny mpampiasa anay, mpamatsy ary koa ny fiarahamonina hahafantatra bebe kokoa momba ny olana amin'ny tontolo iainana ary hanohana ny asa amin'ny fitrandrahana ny fiaraha-miasa, hampihena ny fiantraikany amin'ny varotra amin'ny tontolo iainana.
Nambaran'ny YIC fa ny vokatra rehetra amidy dia 100% azo antoka.Each dia nosedraina tsara ny vokatra alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny mpanjifa. Tanjona iourour no tompon'andraikitra amin'ny mpanjifantsika ary mahafa-po azy ireo.
Ny YIC dia nanaiky ny hanome fahafaham-po sy manaitra ny mpanjifa amin'ny fahombiazan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny filaminana ary ny fandefasana ara-potoana. Izany dia vita amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena ho an'ny fanatsarana hatrany ny fizotranay, ny serivisy, ny vokatra.
Ny YIC dia hiantoka ny fiasa rehetra dia tsy misy olana alohan'ny fananganana. Ny ampahany rehetra dia hampiditra ny QC Dep., Afaka manome ny teknolojia fitiliana teknolojia isika. Ampidiro ny fitiliana fiasa, fanaraha-maso Visual, Fanaraha-maso X-Ray, Fanandramana Solderability ary fanamarinana famonoana Acetone. Ny antoka omena ny singa rehetra dia noproblems misy ny loza kely indrindra amin'ny mpanjifa.
Azafady alefaso amin'ny kalitao ny fanontanianao momba ny kalitao na fangatahana ny hetsika Corrective. Ny fanontaniana rehetra momba ny Quality ManagementSystem dia mahatsiaro hifandray aminay. Email: Info@YIC-Electronics.com
Ny fizahana rehetra sy ny tarehimarika rehetra nosedraina, niresaka momba ny fitsapana asfull-function, araka ny voafaritra tany am-boalohany, ny applicationnotes, na ny rindranasan'ny mpanjifa, ny fiasa feno avy amin'ireo namboarina, anisan'izany ny tarehimarika DC amin'ny fitsapana, fa tsy tafiditra ao amin'ny fizotran'ny AC sy ny valiny ny fizarana sy ny fanamarinana ny fanandramana tsy marobe dia ny fetin'ny parameter.
Fampiasana ny mikraoba stereoskopika, ny fisehoan'ireo singa ho an'ny360 ° amin'ny fandinihana rehetra. Ny fifantohan'ny fanaraha-maso dia ahitana ny entana entana; karazana mofomamy, daty, fandroana; ny fanontana sy ny fonosana; pinarrangement, coplanar miaraka amin'ny fametahana ny raharaha sy ny sisa.
Ny fisafoana fahitana dia afaka mahatakatra haingana ny fepetra takiana amin'ireo fepetra takian'ny orinasa mpamokatra marika, ny fenitra anti-statis andmoisture, ary na ampiasaina na havaozina.
Fanaraha-maso ny taratra X, ny lalan'ny singa ao amin'ny fanaraha-maso manodidina ny 360 °, hamaritana ny firafitra anatiny amin'ny fitsapana ny komponenunderunder ary ny toeran'ny fifandraisana fifampizarana, azonao atao ny fitiliana santionany maro dia mitovy, na mifangaro (mifangaro. -Up) mipoitra ny olana; inaddition izy ireo miaraka amin'ny mombamomba azy manokana (Datasheet) ankoatry ny tsy fahazoana ny fahamarinan'ny santionany alohan'ny fitsapana. Toerana fifandraisana misy ny fonosana faran'izay tsara, hianaranao ny fifandraisana amin'ny mofomamy sy ny fonosana eo anelanelan'ny tsipika tsy ara-dalàna, mba hanilihana ny lakilasy sy ny tariby malalaka.
Fanamarinana famafana asidra
Ny fanalahidin'ny tsy manam-pahaizana amin'ny fanontana lahatsoratra sy ny «acetone acétone» na «ikon» na «landy» ary hamafa ny fanoratana ny ranomainty ambany dia mora esorina.